Chizvarwa chitsva 4D HIFU Anti-kuchembera Chiso chinosimudza muchina
Hifu rudzi rutsva rweiyo isiri-yekuvhiya, isiri-inokanganisa nzira iyo inoshandisa tekinoroji yeultrasound uye nemuviri chaiwo kurapa maitiro ekuomesa uye nekutaurisa ganda rinodzungaira kumeso kwako. HIFU kurapwa kunoshandisa yakakwira-kusimba yakatarisana nemasaidhi e ultrasound. Kuwanda kwavo kwakanyanya kunoita kuti tekinoroji isvike pane yakatarwa pasi pechiso cheganda uko inosvika kune iyo SMAS rukoko (mhasuru yakatenderera). Kushanda zvakadzika pazasi pechiso kunosimudzira kukura kwe collagen pasina kukuvadza chikamu chekunze cheganda. Izvi zvinoguma nekusimbisa kwenguva refu, nekusimbisa ganda, mushure mekurapwa kumwe chete.
Oxygeneo Nee Yakajeka uye Nee Revive Kit
Oxygen Chiso chinopa chisina kunyorwa ganda kumutsiridza nekubatanidza matatu marapirwo mune rimwe super kumeso. Ichishandisa michina yemhando yepamusoro, iyi 3-in-1 kumeso exfoliates, inosimbisa, uye inogonesa ganda kuti riwedzere kuyerera kweropa, rinogadzira kugadzirwa kwecollagen, uye rinomhanyisa kumutsiridza kwesero. Mhedzisiro yacho inomutsiridzwa zvakanyanya, hutano, ganda rinotaridzika. Chiso cheoksijeni hachitsamwisi uye chakachengeteka pamarudzi ese eganda. Uyezve, kurapwa hakurwadzi, kunogona kupedzwa mumaminitsi makumi matatu, uye hakudi nguva yekuzorora. Zvakanakisa pane zvese, mhedzisiro inogona kuonekwa mushure mekurapwa kumwe chete.
Fractional Microneedle RF acne kubviswa strecth mamaki ekubvisa Machine
Micro-tsono chidimbu cheRF muchina wakasanganiswa neyekutsva adsorption tekinoroji, yekutsvaira mhepo inogona kugadziridzwa zvinoenderana neakasiyana evarwere zvinoda, inogona kubatsira kuendesa simba zvakanyanya munzvimbo yekurapa, kuti ibudirire kubviswa kwemakwenzi, kuchenesa ganda, kubvisa acne uye kutambanudza mamaki kubvisa.
10/25/64 micro tsono tipi inogona kugadzirisa tsono kudzika, tsono frequency, ichigadzira kupisa kwakaiswa kunzvimbo yekurapa, kutyora epidermal chipingamupinyi, kupa mesoderma tishu chaiyo kurapwa.
Inotakurika Q Inoshandurwa Nd YAG Laser
Laser simba rinogadzirwa naNd: YAG laser inogona kunyudzwa zvizere nemelanin, uye iyo melanin inowedzera nekukurumidza uye inopwanya kuita zvidimbu zvidiki zvakakwana kuti zvigadziriswe neiyo lymphatic system, yakagwamba ichibuda mumuviri. Tattoo kana imwe pigmentation inobviswa pasina kukuvadza zvakajairika nyama.
Kushandisa iyo inoputika mhedzisiro yeNd: YAG Laser, iyo laser mwenje inopinda kuburikidza nepidermis kupinda mu dermis uye inotora mhedzisiro pane pigment mass. Iyo laser simba inosanganiswa neiyo pigment. Sezvo iyo laser pulse upamhi ipfupi zvakanyanya mu nanosecond uye ichiuya iine simba rakakwirira, iyo pigment mass ichazvimba nekukurumidza kupwanya kuita zvidimbu zvidiki, zvinozobviswa nemuviri kutenderera system. Ipapo pigments inova yakapfava zvishoma nezvishoma uye pakupedzisira inonyangarika
Cavitation RF Lipolaser 6-In-1 Muchina
Cavitation RF Lipolaser 6-In-1 Mudziyo unobatanidza akawanda-matekinoroji e Multipolar uye Bipolar RF ine Vacuum, 40K Cavitation uye Lipolaser.
Multipolar uye Bipolar RF ine Vacuum
Iyo yepamberi Multipolar RF inounza simba rinopisa zvakadzama mu derma layer, uye inokurudzira kushandisa magetsi emagetsi kudzorera maitiro ehupenyu. Iyo inopa inoshanda kurapa mhedzisiro mu cellulite, muviri kuveza uye collagen kumutsiridzwa.
Nemubatanidzwa wakasimba wezwi wave musoro, yakasimba ruzha rwe40KHZ inogona kuburitswa kuzungunusa mafuta maseru nekumhanyisa kumhanya uye kuburitsa yakawanda yekutsiva mweya muhomwe mukati nekunze kwemafuta maseru, akasimba anokanganisa maseru emafuta kuti agadzire akafuridzira kuputika uye aparadzanise triglyceride mu glycerol uye mahara mafuta acids.
Inozivikanwa seyakapfava laser, inotonhora laser kana yakaderera nhanho laser kurapa, lipolaser inoshandisa mwenje mutsvuku 650nm laser simba kuti ipinde mukati meganda, kana mafuta maseru akaenzaniswa, iyo sero membrane ichagadzira iyo pores kuburitsa mafuta acids uye glycerol. Iwo maseru emafuta anozopiswa kana kudhonzwa neiyo lymph kutenderera neye infrared kurapwa.
Mini Coolplas Fat Inotonhora Muviri Slimming Chishandiso
Zvinoenderana neruzivo rwevatengi uye kurapwa, takagadzira ino Mini Coolplas Fat Yechando muchina weadiki nepakati spas.
Maitiro Ekutonhodza uchishandisa Cryolipolysis zvakasiyana zvachose kubva kune dzimwe dzisiri- kana zvishoma nzira dzinokanganisa, uye yakagamuchirwa senzira inoshanda kwazvo yekudzikisa mafuta.
Iyi shanduko nyowani yekurasikirwa kwemafuta nzira, iyo inogamuchirwa seyakakosha tekinoroji kufambira mberi mukudzikiswa kwemafuta kubvira payakatanga kushandiswa. Kune avo vanhu vari kudya, ita kugara uchirovedza muviri asi uchiri kubvisa mafuta emuno, Cryolipolysis zvirokwazvo chipo chikuru. Kune akanyanya mafuta zvikamu uye zvishoma zvikamu, senge rudo rwekubata (mazamu), uye kumashure mafuta. (Mafuta akasununguka pamusoro pehudyu pamativi ese echiuno), dumbu uye mafuta ekumashure, Cryolipolysis inogona kuburitsa mibairo inokatyamadza.
M-Coolplas Fat Inotonhora Muviri Slimming Machine
M-Coolplas Fat Inotonhora Chishandiso inoshandisa tekinoroji yepamusoro yeCryolipolysis kuendesa iyo inotonhorera simba kune iyo adipose tishu. Simba rinotonhorera rinoomesa mafuta maseru kurufu pasina kukuvadza nyama dzakakomberedza. Iwo maseru emafuta akafa anozobudiswa kunze kwemuviri neyakajairwa metabolism kutenderera.
Iwo masayendisiti esainzi eCryolipolysis akawanikwa nedermatologists Dieter Manstein, MD, naR.Rox Anderson, MD, weWellman Center ye Photomedicine paMassachusetts General Hospital muBoston, mudzidzisi weHarvard Medical School. Vanachiremba nechikwata chavo vakaita tsvagiridzo yakaratidza kuti pasi pemamiriro ezvinhu akanyatso chengetedzwa, maseru emafuta epasi pevhu anowanzo shungurudzwa nemhedzisiro yechando kupfuura mamwe maturusi akapoterera.
Ichi chiitiko chakakosha. Kuburikidza nehunyanzvi uhu, vanhu vanogona kudzora mafuta asingadiwe pane chero nzvimbo dzemuviri. Maitiro ese aya haapindiri. Varwere vane kutonhora kunzwa pakutanga chaiko uye vanonzwa mafuta kuyamwa mukati maanoshanda. Mushonga wese wakasununguka pasina kurwadziwa.
Yekutanga Korea FDA yakabvumidza Plamere Plasma Pen
Yese-In-Imwe Sisitimu ine misoro mina Inochinjika
Yakareruka uye Ergonomic Dhizaini, iri nyore kushandisa
Rechargeable Battery-Simba ine Micro USB Connector
Kumba uye spa shandisa mwenje wechiso weUS
LED inozivikanwa seye inotonhorera laser, ndeye yakachena kuchena yakatetepa chakasangana monochrome mwenje, enzanisa laser uye IPL kurapwa, LED ine yakakwira kuchengetedzeka, yakaderera kuwana uye kushandisa mari uye zvichingodaro, inotonyanya kuchengetedzeka pane chezuva, nekuti haina ultraviolet uye infrared mwenje, yedu kambani tsvagiridzo uye kuvandudza kwe-LED-kwakavakirwa mwenje-inowaniswa kurapwa system, huwandu hukuru hweakasarudzika yepamusoro tekinoroji, zvekuti iri mumunda weye optical runako mune wepasirese mutungamiri, uye mukana kune EU CE chitupa.
Kurapa kwe LED kunogona kusanganiswa neakagwinya ane photosensitive collagen ane akakosha mafotoreceptor, anogona kukurumidza uye kunyatso kuendesa sepsis tishu, nemagirosa matsvuku esero kuti apinze, kuburitsa yakanyanya kushanda photonation reaction - enzyme-inosimudzira maitiro, kuitira kuti chiitiko checell chiwedzere, kusimudzira sero metabolism, ita kuti ganda ribudise collagen uye fiber tishu yekuzvizadza, uku uchiwedzera simba refaji remasero eropa, kuti uwane kugadzirisa, ganda, kuchena, acne, antioxidant athari.
Salon shandisa LED kumeso kugadzirisa ganda kurapwa
Ruoko ruviri rwe LED ganda rekuvandudza system